/ 2 emulator
Part1: Gịnị bụ JUC600?
Part2: Akụkụ nke JUC600
Part3: Olee ndị JUC600 Works & Dee
Part4: Nchọpụta nsogbu na JUC600: atọ kasị Ọtụtụ mgbe Ẹbụp Ajụjụ
JUC600 pụrụ nanị ike kọwaa dị ka ụdị nke Android Mirror eriri USB ma ọ bụ nkwụnye isi na-egosipụta dị iche iche nke ọdịnaya site na ekwentị ka laptọọpụ ma ọ bụ PC. Na nkenke, ọ eme dị ka àkwà mmiri ejikọta android ngwaọrụ mkpanaaka na otu kọmputa.
Na nke a USB, ọrụ ike idetuo na mado ozi ozugbo na ha android igwe site na kọmputa, bugharia nakwa dị ka uku ekwentị na ihuenyo bịaruo ibu ngosi. Ọzọkwa, ndị ọrụ nwere ike mepụta otu ihe comfortably na PC ihuenyo. Na ibu ngosi, ọrụ nwere ike ịdị na-akpọ egwuregwu, nyefee faịlụ, na-enweta ma ọ bụ na-ajụ oku mbata na ederede ma ọ bụ zaghachi ozi iji na òké na keyboard. Ọ bụ na-mfe na-screenshots nke ekwentị na USB na ebe.
Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na Android Sistem ma gụọ 2.3 / 4.0 / 4.1 / 4.2 / 4.3
Ọ Site n'ibu data site na Njikwa faili
Egosiputa android mobile ngwaọrụ na laptọọpụ ma ọ bụ windows desktọpụ kọmputa
-Enye ohere maka adiana na magnification nke ekwentị na ihuenyo on PC
Ohere ọrụ izipu, na-enweta, idetuo na mado odide kpọmkwem site ejikọrọ laptọọpụ ma ọ bụ PC na Anglịkan / akwado kpọmkwem òké na keyboard arụmọrụ si ejikọrọ windows kọmputa na desktọọpụ.
Oku na abata na ike-natara ma ọ bụ jụ mfe si PC.
Ekwentị screenshot nwere ike iwere na na PC na mgbe ahụ azọpụta.
Video ngosi nwere ike na-akwado na elu ụdị eg Android 4.0
Mîdaha Multi-asụsụ tasking
Na-egwuri egwu dị iche iche egwuregwu na a uku ngosi
Ozugbo nkwụnye na-ọma ejikọrọ, ọ bụ mfe iji android ngwaọrụ dị ka ma ọ bụrụ na ọ bụ kọmputa onwe ya. Ndị ọrụ nwere ike ha na-egwu mmasị egwuregwu, na-eziga ma ọ bụ zaghachi akụkụ, ajụ ma ọ bụ na-enweta oku mbata na kwa na-agagharị na internet.
Iji nyefee data, gị na mkpa iji ịdọrọ nchekwa ma ọ bụ faịlụ site na laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa ebe ị chọrọ ka nyefee ya. Faịlụ a ga-ahụ ga depụtaghachiri ka họrọ ọnọdụ.
Minimising ma ọ bụ Ịnwetacha uru ịrụ ekwentị window bụkwa mfe; ọrụ nwere ike inweta nkọ mkpebi. Meziri-emekarị bugharia na-akpaghị aka ma ọ bụrụ na a ada, ọ ga-mere aka. Ọzọkwa, ákwà ngebichi nke android ekwentị nwere ike weghaara na-azọpụta ozugbo na ejikọrọ laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa.
Ọrụ nwere ike mfe idetuo na mado ozi site na kọmputa na ederede windows. The ozi na-egosipụta n'otu ntabi na ihuenyo nke android ngwaọrụ mkpanaaka.
JUC600 ohere ọrụ na-akpọ kpọmkwem na-enweta ozi Ịma Ọkwa. A balloon ngosi na-egosipụta site android mirror software mgbe ọ bụla onye na-akpọ ma ọ bụ a ederede ozi a natara. Onye ọrụ nwere ike ịkwụsị vibration mepụtara site na-abata Ịma Ọkwa site na ịpị nanị yiri ihuenyo.
Dị ka e kwuru na mbụ, ọrụ ike ahu nagide keyboard na òké akara. A mma, ọrụ ike 'N'aka ekpe Click', 'N'aka ekpe Click' na 'Pịa na Slide.' Ọrụ nwere ike iji keyboard mgbe na iji kọmputa ede enweghị na-eji ekwentị ihuenyo mmetụ mgbe aza ozi ma ọ bụ na-ajụ ma ọ bụ na ịnakwere oku mbata.
Ajụjụ 1: My ekwentị na-adịghị Ịbụ merie Jikọrọ. Ihe a pụrụ Ihe kpatara nke a?
Ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu a mgbe ahụ ị chọrọ ime na-esonụ:
1. Tulee ma ọ bụrụ na debugging mode na-nyeere. Ọ bụrụ na ọ bụghị, na-enyere ya.
2. Ọ bụrụ na ị ụfọdụ na JUC600 jikọọ na nsogbu na-aga n'ihu, pịa 'Computer' mgbe ahụ na mmalite-elu menu, ego ọ bụrụ na e 'Android Mirror Drive'. Ọ bụrụ na ọ bụ adịghị, mgbe ahụ, e nweghị ihe jikọrọ mgbe niile. Gbalịa reconnecting na ọzọ kọmputa USB n'ọdụ ụgbọ mmiri na ego ma ọ bụrụ na Ikanam egosi bụ ọkụ.
3. JUC600 nwere ike ịbụ na-ezighị ezi mgbe odori mgbe njikọ ya na ekwentị na kọmputa. N'ihi na oru nkwado, ị nwere ike iru helpline on 888-988-0488 ma ọ bụ zipu ozi-service@j5create.com.
4. Tulee ma ọ bụrụ na USB n'ọdụ ụgbọ mmiri ị na-eji bụ dakọtara na gị android mirror. Ndị kasị atụ aro na otu onye bụ USB 2.0 n'ihi na a ọtụtụ n'ime ha ka ihe atụ USB 3.0 anaghị arụ ọrụ
5. The nsogbu nwere ike ịbụ Android Debugging Bridge Interface. Gaa Leta Ngwaọrụ Manager na ego ma ọ bụrụ na ọ na-ọma arụnyere. A-ezighị ezi arụnyere ọkwọ ụgbọala na-nyere n'onyinye a ajụjụ akara na ọ bụrụ na nke a bụ ikpe mgbe ahụ i kwesịrị iwepụ ya wee wụnye a ọhụrụ-akwọ ụgbọala. Maka ozi ọzọ, ị nwere ike ịkpọtụrụ nkwado otu.
Ajụjụ 2: The ime ọsọ na kwa ngwa ngwa, ihe bụ nsogbu?
Na ngwa ngwa ọsọ nke n'olu site na ike ekewet site;
1. Ọ na-arụ ọrụ na nkịtị mode. Nke a na-akasị adị mgbe ị nwaa iji na android ekwentị ma ọ bụ na ngwaọrụ na akwadoghi JUC600. Ego ọ bụrụ na ekwentị ị na-eji bụ ná nkwado ndepụta.
2. Nke a nwekwara ike ime mgbe ndị Turbo mode bụ on. Ngwa ngwa na ime ọsọ nwekwara ike ịbụ n'ihi na ngwa ma ọ bụ omume na ngwaọrụ. Mkpa ka ị na-achọ enyemaka teknuzu otu.
Ajụjụ 3: The loading mmanya na-kefriza. Kedu ihe bụ nsogbu?
Ị na-adịghị masịrị bụrụ na ị na-enwe nsogbu a n'ihi na android ngwaọrụ na-ghọtara site na ngwa. Ọ bụrụ na nsogbu a adịgide, ahụ na-agbalị na-emechi na disconnecting ngwa mgbe ahụ maliteghariri ekwentị. Reconnect ekwentị na mgbe ahụ na-agba ọsọ JUC600 ngwa otu ugboro ọzọ.
Ajụjụ 4: Videos ike ịmekọrịta on My Computer ihuenyo
Nsogbu ya nwere ike ịbụ ụdị android ị na-eji. A ọnụ ọgụgụ nke android nsụgharị ihe atụ android 2.xxx na android 3.0 bụ dakọtara na usoro ihe omume. Ele gị igwefoto videos, ị ga-mkpa android 4.0. .
Ajụjụ 5: JUC600 Agbakwuru were were na ndị ọzọ na Ngwa Ma nnọọ ngwa ngwa na iji kọmputa ede arụ. Gịnị Bụ Ihe Mere Behind Nke a?
Nke a na-adị mgbe ị nwere ike ghara pịnye ihe ọ bụla ma mebere keyboard na-egosipụta. Iji dozie nsogbu a, gaa 'Android System Setting' mgbe ahụ, pịa 'Setting' na mgbe na Họrọ 'Asụsụ na Input' na mgbe ahụ họọrọ 'MctSoftKey'.
Nke a nwere ike ime mgbe ị na-apụghị pịnye na kwa na-ele mebere keyboard. Iji gbazie a, i kwesịrị-agbaso otu usoro depụtara n'elu
Android nwekwara ike èbè ha mmasị ọdịnaya ka TV na ole na ole na-ewu ewu ngwa gụnyere All Wụnyenụ anyị họọrọ usoro, na Twonky Doo, nke ikpeazụ nke na-akọwa n'uju ihe Dt si 'Turbocharge. Oru oma karịa airplay onwe ya.
10 Ụzọ Play Android Games on Windows PC / Mac
Top 10 Best Android Game emulator ka Download maka Windows
> Resource> emulator> ihe ọmụma banyere J5